ဓါတ်ပုံများ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
This entry was posted on April 10, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, အထူးကဏ္ဍ, ဥပဒေ, ဆောင်းပါး.	Leaveacomment
သံတော်ဆင်ဂျာနယ်ကပြောပြီ၊ဆူပူမှုသည် အာဏာ လိုချင်သူနှင့် ဆက်စပ်
This entry was posted on April 9, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, အထူးကဏ္ဍ, ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
မီဒီယာ အုပ်စုတစ်စုကို အဖျက်သမား အုပ်စုတစ်စုက မီးလောင်တိုက်သွင်းဖို့ ကြိုးစား
မတ်လ(၂၂)ရက်ဝန်းကျင်လောက်က မိတ္ထီလာကို သတင်းလာယူတဲ့ မီဒီယာ အုပ်စုတစ်စုကို အဖျက်သမား အုပ်စုတစ်စုက မီးလောင်တိုက်သွင်းဖို့ ကြိုးစား ခဲ့တယ်။ အဲဒီထဲ မှာ နိုင်ငံခြား သတင်းထောက်တွေလည်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မဖြစ်မြောက်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ သတင်းသဲ့သဲ့ကြားလိုက် ရပါတယ်။
AP သတင်းထောက် ကိုခင်မောင်ဝင်း(ရွှေအင်းသား)ကို မေးကြည့်တဲ့အခါ “အဲဒီဖြစ်စဉ် အမှန်ပါဘဲ” လို့ပြောပါတယ်။
ဖြစ်စဉ်ကဒီလိုပါတဲ့။ ” 7Day/Messenger/AFP/RFA သတင်းဌာနက ဓာတ်ပုံဆရာတွေ၊ သတင်းထောက်တွေ နဲ့အတူ အဝေးပြေး ကားဝင်းက တဆင့် မြို့ ထဲကို ကား နဲ့သွားခဲ့ပါတယ်။ မြို့ က (၂)ရက်လောက်နဲ့တင် အတော်လေးပျက်စီးနေပြီး မီးလောင်ပြင် ဖြစ်နေပါပြီ ။ ဈေးကုန်းကျောင်း ဆရာတော်ကို ၀င်ဖူးပြီး ဆရာတော်က ဒကာတစ်ယောက်ထည့်ပေးလိုက် ပါတယ်။ မီးလောင်ပြင်တွေ ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ကြတာပေါ့။ အဲဒီအချိန် ဗလီ တစ်ခုကို မီးရှို့နေတဲ့ အုပ်စုနဲ့ ဘွားကနဲ့ ပက်ပင်းသွား တိုးပါတယ်။ ပိာုမှာ မီဒီယာတွေ ငါတို့ကိုဓါတ်ပုံရိုက်နေတယ်… ကားကို မီးရှို့လို့အော် ပြောပြီး တုတ်၊ ဓါး၊ ၀ါးချွန်တွေနဲ့ ရောက်လာကြတယ်။ ကားကို ၀ိုင်းထားပြီး ကားကို ၀ိုင်းထုကြ တယ်။
ကိုရင်တပါးက မင်းတို့ဘာလို့ဓါတ်ပုံရိုက်တာလဲ မေးတော့ မရိုက်ကြောင်းရှင်းပြလဲ မရပါဘူး။ ဘေးမှာ သတ်မယ်၊ ရှို့မယ် တကဲကဲ လုပ်နေကြပြီ။
ဒါဆိုကတ်ပြားထုတ်ဆိုလို့ ရိုက်လက်စ memory card ထုတ်ပးလိုက်တော့ ရိုက်ချိုးပစ်တယ်။ အဲဒီ အချိန် ကားထဲမှာရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံ ဂျေမောင်မောင်ကို ကားထဲက ဆွဲ ချနေ တာ မနည်း တောင်းပန်နေ ချိန်မှာ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးက ကျွန်တော့်ကို ဌက်ကြီးတောင်ဓါးနဲ့ ရင်ညွန့်ကိုထောက်ထားတာ ။ ဘေးမှာ သွေးကြွအောင် ညာသံပေးနေတဲ့ သူတွေက အများကြီးပါပဲ။
ကတ်ပေးလိုက်တဲ့ ဘုန်းကြီးကို အကူအညီလှမ်းတောင်းရတယ်။ကယ်ပါဦး ဘုန်းဘုန်း ရယ်ပေါ့။ အဲဒီမှာ ဘာကံကောင်းသွားလည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ထဲမှာ ပါတဲ့လူက နာရေးကူညီမှုမှာ လုပ်နေတဲ့ လူဆိုတာ ဦးဇင်းတချို့က သိကြတယ်။ အဲဒီမှာ ၀င်တောင်းပန်ပေးတော့ လက်ခံကြချိန်မှာ မရဘူး၊ သတ်မယ်ဆိုတဲ့ ၂ ပါး လောက်ရှိနေသေးတယ်။
ကားနောက်ဖုံးကို ဖွင့်ပြီး ကင်မရာတွေကို ရိုက်ချိုးဖို့ လုပ်နေကြပြီ။ ဒါနဲ့ ခုနက အကူအညီပေး တဲ့ ဦးဇင်း က မင်းတို့ မီဒီယာကား ချက်ချင်းသွား ၊ မကြည့်ချင်ဘူး၊ ဘာညာပြောပြီး မောင်း ထုတ်မှ လွတ်သွားတာ။ ဒါတောင်ဈေးကုန်းကျောင်းရောက် တဲ့အထိ အချို့ လိုက်လာ ကြသေးတယ် ။ သွေးဆာနေတဲ့လူတစု က ကျောင်းကို ၀ိုင်းထားလို့ ဆရာတော်က ရဲစခန်းကို အကူအညီ လှမ်းတောင်းပေးတယ်။ သက်ဆိုင်ရာက ယာဉ်တန်းနဲ့ အပြင် လာထုတ်ပေး ပါတယ်။ ”
Ref – နံနက်ခင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ-၃၊ အမှတ်- ၄၉၆
Photo News: Burma,Yangon,48th St. Swadikia 13 students Shahidi
A member of Myanmar Red-Cross team walks between body bags containing unidentified victims’ bodies Yangon, on April 2, 1013 — Photo by AFP ~ read more http://t.co/P7evveNtg5
A man weeps as Red-Cross volunteers and Muslims loadabody bag, containingavictim ofamosque fire in to an ambulance in Yangon, Myanmar, arly on April 2, 1013 — Photo by AFP ~ read more http://t.co/P7evveNtg5
Members of Myanmar Red-Cross team and Muslims carryabody bag containing an unidentified victim’s body to an ambulance afterafire broke out atamosque in Yangon, on April 2, 1013 — Photo by AFP ~ read more http://t.co/P7evveNtg5
A group of Muslim people pray for school victims in front of the Islamic school afterafire broke out in downtown Yangon early on April 2, 1013 — Photo by AFP ~ read more http://t.co/P7evveNtg5
13 Hafiz Muslim Students burnt alive in Botataung, Yangon ~ read more http://t.co/P7evveNtg5 2, 1013. — Photo by AFP
This entry was posted on April 6, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, အထူးကဏ္ဍ, ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
ဂျင်မီကာတာ ရန်ကုန်မှာ လူထုဟောပြောပွဲလုပ်
ဧပြီ ၅ ရက်နေ့ ညနေ ၇ နာရီက ရန်ကုန်မြို့ Park Royal Hotel မှာ အမေရိကန် သမ္မတ ဟောင်း Jimmy Carter ကလူထုဟေားပြောပွဲတစ်ခုပြုလုပ်။ ပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ် ဒဲရစ်မစ်ချယ် က အဖွင့်မှာစကား ပြောကြားခဲ့။ ဂျင်မီကာတာဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ The Carter Center ဖွင့်လှစ်သွားဖို့ရှိနေ။
ရန်ကုန်၊၄၈-လမ်း၊ဟာဖိဇ်ကျောင်းသားဓါတ်ပုံ သတင်း၊ Photo News: 13 Hafiz Muslim Students burnt alive in Swadikia, 48th St. Botataung, Yangon, Burma
Photo News: မီးလောင်ကျွမ်းမှုမှာသွေးရိုးသားရိုး ဖြစ်စဉ်မဟုတ်၊အစိုးရမှဖော်ထုတ်ပေးရန် PCN အဖွဲ့မှ(၈၈)မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုထွန်းကြည်မှ မီဒီယာများသို့ ပြော .. ..
ယခု မီးလောင်ကျွမ်းမှုမှာ သွေးရိုးသားရိုးဖြစ်စဉ်မဟုတ်ခြင်းကြောင့် အစိုးရမှ ဖော်ထုတ်ပေးရန် PCN အဖွဲ့မှ (၈၈)မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ကိုထွန်းကြည်မှ မီဒီယာများသို့ ပြောကြားပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ရေကျော်ရပ်၊ (၄၈)လမ်း(အလယ်)၊ အမှတ်(မ/၁၈၃)ရှိ ဆွာဒီကီယာ ဟာဖီးဇ်ကျောင်းအား ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂)ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် (၂)နာရီကျော် ၀န်းကျင်အချိန်ခန့်မှာ မီးလောင်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်အား သွေးရိုးသားရိုး ဖြစ်စဉ်မဟုတ်ကြောင်း မျက်မြင်သက်သေများမှ အလင်းမျက်ဝန်းသို့ ပြောကြားပါတယ်။
သေဆုံးသူများမှာ အသက် (၁၀)နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ် ကလေးငယ်များ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
အခင်းဖြစ်ရာဒေသသို့ မီးသတ်ကားများနှင့် ရဲကားများ ရောက်ရှိလာသော်လည်း တိတ်တဆိတ်ပင် ကြိတ်၍ ဖြေရှင်းခဲ့တယ်လို့ ၄၈ လမ်းသို့ ရောက်ရှိနေသည့် အလင်းမျက်ဝန်း cj တစ်ဦးမှ သတင်းပေးပို့ပါတယ်။
မီးအားမြှင့်စက်အား ကျောင်းအောက်ထပ်တွင် ထားရှိထားပြီး လောင်ကျွမ်းခံရသည်မှာ ကျောင်းအပေါ်ထပ်ဖြစ်ခြင်း၊ ဗို့အားများ၍ လောင်ကျွမ်းခြင်းဟု ရဲတပ်ဖွဲ့အပါအ၀င် မီဒီယာအချို့မှ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သော်လည်း ညပိုင်းတွင် ကျောင်းအနေဖြင့် မီးအားသုံးစွဲစရာ မရှိခြင်းနှင့် ကျောင်းတွင်း၌ လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးများအား စနစ်ကျစွာ သွယ်တန်းအသုံးပြုထားခြင်းကြောင့် သွေးရိုးသားရိုးမဟုတ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
မီးအားမြှင့်စက်မှာ ပြူတင်းပေါက်အနီးတွင် ရှိနေပြီး မီးလောင်သည်ဟု အသံကြား၍ ပြေးဆင်းလာသော ကလေးငယ်များမှာ ဆီများဖြင့် လျှော်လဲခဲ့ကြကြောင်း၊ ကြမ်းပြင်တွင် ဆီများ ဝှေ့နေသည်မှာ ထူးခြားမှုဖြစ်နေကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
ယခု အခင်းဖြစ်ရာ ရေကျော်ရပ်ကွက်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာအများစု နေထိုင်ပြီး ဟိုးယခင်ကတည်းက ဆွာဒီကီယာကျောင်းအား ပြဿနာ ပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း၊ ကျောင်းသားများအား ရပ်ကွက်တွင်းမှ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူငယ်များက အမြဲလိုလို ရန်မူလေ့ရှိကြောင်း၊ ကျောင်းအပေါ် အမြဲရန်ဆောင်နေတတ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၇ ခုနှစ်ကလည်း မန္တလေးမဟာမုနိ ရုပ်ပွားတော်အား ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့်ရဲ့ ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် အရာရှိတချို့မှ ဌာပနာ ဖောက်ထွင်းမှုအား အာရုံပြောင်းရန်အတွက် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ဘာသာရေး အကြမ်းဖက်မှုများ ဖန်တီးခဲ့စဉ်ကာလကလည်း အဆိုပါ ၄၈ လမ်းကျောင်းတွင် ရေကျော်ရပ်ကွက်သားများမှ ကျောင်းအား ၀ိုင်းထားခဲ့ခြင်းများ ရှိခဲ့ဖူးကြောင်း၊ ကျောင်းသားများ မအိပ်စက်ခင် ည (၉)နာရီကျော်အချိန်ခန့်မှာ ကျောင်းအား မီးတင်ရှို့မည်ဟု ပြောဆို၍ ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ အစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အကြမ်းဖက်သမား လူငယ်များမှ ၀ိုင်းခံရဖူးခြင်းများ ရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
မီးသတ်မှ မီးငြိမ်းသတ်စဉ် (ရေဖြန်းလောင်းစဉ်) မီးတောက်များ ပိုမို တောက်လောင်လာခြင်းမှာ ထူးခြားမှုဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိပ်ငွေ့များ ပါဝင်နေကြောင်း၊ ပိရိစွာ လုပ်ကြံခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းများအား နေရာသို့ရောက်ရှိနေသည့် cj တစ်ဦးမှ ပြောပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မီးတောက်များမှာ ပိုမို ကြီးထွားလာခြင်းကြောင့် ၀ိုင်းကြည့်နေသူများမှ အတင်း ရေပက်ဖျန်းခိုင်းရကြောင်း သိရပါတယ်။
ဤဖြစ်စဉ်မှာ စနစ်ကျစွာ၊ ပိရိစွာဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း လေ့လာသူများက သုံးသပ်ပါတယ်။
ဤ ဖြစ်စဉ်အား Eleven Media မှ စတင်၍ မီးလောင်မှုအား လျှပ်စစ်ဝါယာရှော့ခ်ဖြစ်သည်ဟု ရေးသားတင်ပြခဲ့ကြသော်လည်း မှားယွင်းနေကြောင်း သုံးသပ်ကြပါတယ်။
မီးလောင်ခံရမှုကြောင့် ကလေးငယ်များအား နေရာပြောင်းရွှေ့ပေးထားကြောင်း သိရပါတယ်။
မီးလောင်ကျွမ်းခံရမှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့သူ ကလေးငယ်များမှာ အထက် (၈)ပေခန့်သာမြင့်သော အထပ်ခိုးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပြင်ပမှ လှမ်း၍ မှီနိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ကျောင်းတွင်း၌ မီးစွဲလောင်စရာ လောင်စာလည်း မရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
ကလေးငယ်များသေဆုံးနေခြင်းမှာ ထွက်ပြေးသည့် အနေအထားမဟုတ်ကြောင်း၊ သေဆုံးနေသည့် မြင်ကွင်းအား မြင်ရသူတိုင်း မျက်ရည်ကျရကြောင်း cj မှ သတင်းပေးပို့ပါတယ်။
သေဆုံးသွားသည့် ကလေးငယ်များအား သယ်ယူစဉ် ဒီဇယ်ဆီနံ့များ ရနေကြောင်း သယ်ယူပေးခဲ့သူတစ်ဦးမှ ပြောကြားပါတယ်။
မီးလောင်မှုမှာ နာရီဝက်မျှလောက်သာ ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် သေဆုံးခဲ့ရသူ ကလေးငယ်များမှာ ကြာရှည်စွာ လောင်မြိုက်ခံခဲ့ရပုံများ တွေ့ရရှိရပါတယ်။
ယခု မီးရှို့ခံရမှုဖြစ်စဉ်မှာ အငိုက်မိကာ ခံလိုက်ခြင်း၊ လုံခြုံရေးအား ယုံကြည်စွာဖြင့် စိတ်ချနေထိုင်ခြင်းများကြောင့် ယခုကဲ့သို့အခြေအနေအထိ မမျှော်လင့်ဘဲ ဖြစ်ခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဖြစ်စဉ်အပေါ် ပိရိစွာဖြင့် အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းသွားခြင်းမှာ ထူးခြားနေပြီး၊ ရဲဇာနည်စာမျက်နှာမှလည်း ဖြစ်စဉ်ပေါ်ပေါက်ပြီး နာရီပိုင်းအတွင်း ချက်ချင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်အချက်မှာလည်း မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်နေပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ – EMG, MMM
This entry was posted on April 2, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, အထူးကဏ္ဍ, ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
This entry was posted on April 2, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
၄၈ လမ်းကျောင်းတွင် ဓါတ်ဆီဖြန်းပြီး မီးရိူ့ ထားတဲ့ပုံ၊ အ၀တ်တွေ ဖေါ့ တွေမှာ ဓါတ်စီတွေ မှာ ဓါတ်စီတွေ ဆိုနေတယ် …
သေသေချာချာ ကြည့်ပါ ဓါတ်စီတွေ ဖြန်းပြီး မီးရိူ့ ထားတဲ့ ပုံ အ၀တ်တွေ ဖေါ့ တွေမှာ ဓါတ်စီတွေ မှာ ဓါတ်စီတွေ ဆိုနေပါတယ်
This entry was posted on March 26, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
Photo News:အကြမ်းဖက်ဗမာအုပ်စုကြောင်း ဖျက်စီးခံရသော အုတ်ဖိုဗလီ …
မိတ္ထိလာဓါတ်ပုံသတင်း, Meik Htila Photo News
This entry was posted on March 23, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
Meikhtila ,Burma Photo News: မိတ္ထိလာဓါတ်ပုံသတင်း
ကြိုတင်အကွက်ချ စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း ဖြစ်နေတာပါ။
မိတ္ထိလာပဋိပက္ခအတွင်းရသလောက်စုစည်းသော လူသေစာရင်း …
မြန်မာနိုင်ငံခွဲရေးတွဲရေးပြသနာအတွက် လန်ဒန်စုံညီ ဆွေနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သော “ဝတ်လုံတော်ရ ဦးအောင်သင်း” …
M-Media addedaphoto
‎”၁၉၃၁ ခု နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ.တွင်အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို. အထက်လွှတ်တော်တွင် အိမ်ရှေ့ ဥပဇာ ဝေလမင်းသား ကိုယ်တိုင်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သော ခွဲရေးတွဲရေး ပြဿနာအတွက် မြန်မာပြည် စုံညီဆွေးနွေးပွဲ (Round Table Conference) သို့ မြန်မာမွတ်စလင် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့သော ဝတ်လုံတော်ရ ဦးအောင်သင်း”ဓါတ်ပုံကို ၁၉၃၂ ခုနှစ်အတွက်ထုတ်ဝေသော မြန်မာပြည်လမ်းညွန်စာအုပ်မှ ရယူထားပါသည်။
(၁)၁၉၃၂ ခုနှစ်အတွက်ထုတ်ဝေသော မြန်မာပြည်လမ်းညွန်စာအုပ်
(၂)ဦးကိုကိုလေး အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ဗမာမွတ်စလင် ကွန်ကရက် ရေးသားသော ဗမာမွတ်စလင်လူမျိုးစုပြဿနာ
(၃)ဘာသာပြန် စာပေအသင်းမှ ထုတ်ဝေသော နှစ် ၅၀ ကမ္ဘာ့ရေးရာ (၁၉၀၀-၁၉၅၀) ဒုတိယတွဲ
via Baydar Lam
This entry was posted on March 13, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, အထူးကဏ္ဍ.	Leaveacomment
Attachments of Rohingyas’ doccuments(Part – 3) ရိုဟင်ဂျာအထောက်အထားဆိုင်ရာ ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများအပိုင်း(၃) …
N.D.P.D. presentation for the native inhabitants (Whose Faith Is Islam) residing in Rakhine State (Arakan State) as the citizen by law and by natural or birth right as well as the indenous national of Republic of Union of Myanmar Go to the Burmese Version – Link (1) – (Burmese Version) Very Important ရခိုင်ပြည်ရှိမွတ်ဆလင်များသည်သဘာဝအလျှောက်တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း၊ပြည်ထောင်စု […]
This entry was posted on March 13, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, မှတ်စုမှတ်ရာများ, အထူးကဏ္ဍ, ဆောင်းပါး, နိုင်ငံရေး.	Leaveacomment
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဒေါ်သင်းကြည်နှင့် ဦးထွန်းအောင် (ရိက္ခာတော်ရ ဒုတိယပညာမင်းကြီး) တို့က တည်းဖြတ်၍ ယခင်ထုတ်ဝေခဲ့သောမြေပုံစာအုပ်
ဤမြေပုံစာအုပ်ကို နယ်သာလင်နိုင်ငံ အမ်စတာဒမ်မြို့၊ ဂျမ်ဘာတန်ကုမ္ပဏီ လီမိတက်၏ ပထဝီဝင်နှင့် မြေပုံဆွဲဌာနခွဲမှ စီစဉ် ပြုစုလျက် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဒေါ်သင်းကြည်နှင့် ဦးထွန်းအောင် (ရိက္ခာတော်ရ ဒုတိယပညာမင်းကြီး) တို့က တည်းဖြတ်၍ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာန အတွက် ခံဝန်ချုပ်ဖြင့် ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေသည်။ Clean Text မှ ကူးယူဖော်ပြသည် — ကျောင်းသုံး မြေပုံစာအုပ် -( မြန်မာလူမျိုး ) (4 photos)
This entry was posted on March 7, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, မှတ်စုမှတ်ရာများ.	Leaveacomment
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံပြည်နယ်နှင့်တိုင်း(၁၄)ခုရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ခရစ်ယျာန်ဘုရားရှစ်ခိုးကျောင်း၊ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်နှင့်အစ္စလာမ်ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်းများ၏ အရေအတွက်စာရင်း၊
other friends shared M-Media‘s photo.
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း (၁၄)ခုရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ခရစ်ယျာန် ဘုရားရှစ်ခိုးကျောင်း၊ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် နှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းများ၏ အရေအတွက်စာရင်း၊Source: ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၁၉၉၇ ခုနှစ် မတ်လတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော သာသနာရောင်ဝါထွန်းစေဖို့ စာအုပ်မှ
This entry was posted on February 25, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, မှတ်စုမှတ်ရာများ.	Leaveacomment
First Internatioanal Conference on the Rohingyas of Burma – an old video, only recently released
Friday, February 08, 2013 Dr. Habib Siddiqui, Japan, Rohingya conference
Posted by Dr. Habib Siddiqui
In 2007 JARO under the able leadership of Mr. Salim Ullah hosted the first international conference on the Rohingyas of Burma (Myanmar) in two cities of Japan, which included Tokyo. Recently, I came across the newly released videos from this conference. I was invited as the chief guest and keynote speaker in this conference. The videos can be seen here in piecemeals (8 part series).
As you will notice, my concerns about the Rohingya people inaflawed democracy came so true with the latest unleasing of the pogroms against them – this timeacollaborative one between the state actors and racist, criminal Rakhine politicians of the Arakan state.
This entry was posted on February 10, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, ဗီဒီယို, အထူးကဏ္ဍ, ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
photos, Videos News
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 5:09 PM No comments:
This entry was posted on February 8, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, ဗီဒီယို, ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
This entry was posted on February 7, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
သူတစ်ပါးကိုးကွယ်ရာကို မစော်ကားရ (ကွရ်အာန် ၆း၁၀၈)
(ကွရ်အာန် ၆း၁၀၈)
This entry was posted on February 7, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, အထူးကဏ္ဍ.	Leaveacomment
ဟုခေါ်တွင်သည်။ သူအမည်အရင်းမှာ ရာမန်ခန်း (Ramankan Khan) သို့မဟုတ် ရာမန် (Raman) သာဖြစ် ပါသည်။
မျက်လုံး တဖက်ကန်း၍ ခေါ်ဆိုခြင်း (သို့) မိသားစု အမည် (ခန်း) မျိုးနွယ်ဖြစ်၍ ခေါ်ခြင်း ဟုတ် မဟုတ် ရေးသားထားခြင်းမရှိပေ။
အထက်ဖော်ပြပါ ကောက်နှုတ်ချက်သည် ဦးဖေမောင်တင်နှင့် GH Luce ဘာသာပြန်ဆိုသော မှန်နန်း ရာဇဝင် (The Glass Palace Chronicles of Kings of Burma ) ပထမအကြိမ်ကို အောက်စဖို့ တက္ကသိုလ် လန်ဒန်တွင် ၁၉၂၃ ခုနှစ်တွင် ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေပြီး ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ပုံနှိပ်တိုက်မှ ၁၉၆၀ တွင် ထပ်မံပုံနှိပ် သည့် ) မြန်မာနိုင်ငံသုတသန အသင်းမှ ထုတ်ဝေသည့် စာအုပ် စာမျက်နှာ ၁၀၀ မှ ၁၀၃ မှ ကိုးကားဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော် အစ္စရေးနိုင်ငံသား ဂျူး လူမျိုး ဒေါက်တာ မိုရှေရေးဂါး ( ထိုအချိန်က ရန်ကုန်မြို့ရှိ အစ္စရေး သံ အရာရှိ၊ နောင်တွင် အစ္စရေး နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေး လေ့လာရေး ဌာနမှူး တာဝန်ခံဖြစ်လာသူ ) ရေးသားပြုစုသော မြန်မာ့မြေမှ မွတ်စလင်မ်များ(The Muslims Of Burma) စာအုပ်တွင်မူ ခမည်းတော် အနော်ရထားမင်းကိုရဲ့ ပုဂံ ထီးနန်းကို ဆက်ခံခဲသည့် စောလူးမင်း ( ၁၀၇၇-၁၀၈၈) သည် ငယ်စဉ်က အာရဗ် လူမျိုး မွတ်စလင်မ် တစ်ဦးထံ ပညာသင်ကြားခဲ့ကြောင်း နှင့် သူဘုရင် ဖြစ်ချိန်၌ သူ့ဆရာ၏ သား ရာမန်ခန်း (YAMAN KHAN) ကို ဥဿစား(ပဲခူး)မြို့စားအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့ကြောင်းရေးသားခဲ့ပါသည်။ ကျမ်းပြုဆရာ မိုရှေးရေးဂါးမှ အောက်ခြေ ရှင်းလင်းချက်တွင် မြန်မာ စကားတွင် R မရှိသဖြင့် နာမည်အမှန် Rahman Khan အား Yaman Khan ရမန်ခန်း(သို့) ရမန်ကန်း ဟုရေးသားကြောင်း ဖော်ပြပါရှိသည်။
အလျဉ်းသင့်၍ ပြောရမည်ဆိုလျင် သူသည် မွတ်စလင်မ်တစ်ယောက် ဖြစ် သည်မှာ သေချာသည် ပင်လျင်ပင် ပထမ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ဒုတိယမြောက် ဘုရင် စောလူးမင်းအား တော်လှန်ခြင်း ကို မပြုလုပ် သင့်ပေ။ အထူးသဖြင့် စောလူးမင်းသည် ငယ်သူငယ်ချင်းဖြစ်ပြီး ဘုရင်က မြို့စားအဖြစ် ချီးမြှင့်မြောက် စားထားလျက် ပုန်ကန်ခြင်း မပြုသင့်ပါ။
ငယ်သူငယ်ချင်းဖြစ်သော်လည်း ဘုရင်နှင့် ဝေးဝေးနေသင့်ပါသည်။ လေးစားကြောက်ရွံ့မှုရှိရပါမည်။ ဘုရင်က ခေါ်၍ အတူတူ ကြွေအံ့ ကစားရခြင်းရှိလျှင်ပင် အနိုင်မကစားသင့်ပါ။ ယခုမူ အနိုင်ကစား ရုံမက လက်ခမောင်းပင်ခတ်လိုက်ခြင်းမျာ မသင့်လျော်ပါ။ စောလူးမင်းက ရှက်ရမ်းရမ်း၍ မင်းယောက်ျား ပီသ လျှင် သတ္တိရှိက ထောင်ထားခြားနားဟု ပြောလျှင် ပင် ဝန်ချတောင်းပန်သင့်ပါသည်။
ရာမန်ခန်းမှာ ကြွေအံကစားခြင်းသာ တော်သည်မဟုတ် စစ်ပရိယာယ်လည်း ကြွယ်သူဖြစ်သည်။
ပုဂံ ကမ်းလွန် ဧရာဝတီ မြစ်ကမ်း ပြည်တော်သာကျွန်းတွင် ရွှံ့နွံ့တော၌ ဝါးဖြင့်လုပ်သော ဆင်ရုပ်မြင်းရုပ် လူရုပ်များထောင်ထားပြီး ည အချိန် ကျန်စစ်သားနှင့် အင်အားတောင့်တင်းသော ပုဂံစစ်သား များ ကို စစ်မြှုပြီး ထောင်ခြောက်ထဲ၌ ပိတ်ဖမ်းခဲ့သည်။
စစ်နိုင်ချိန်၌ စောလူးမင်းကို မသတ်ဘဲ ကောင်းစွာ ပြုစု၍ တောင်းပန်ပြိး စစ်ရေး လေ့ ကျင့်ခြင်း သာ ဖြစ်ကြောင်း လျောက်ထား အသနားခံပါက အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်နိုင်သည်ကို မခန့်မှန်း မိဘဲ ဘုရင်ကို သတ်ခဲ့သဖြင့် ကျန်စစ်သား လွှတ်သော မုဆိုး ငဇင် လုပ်ကြံခြင်းခံရပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
The Glass Palace Chronicles of Kings of Burma စာအုပ် PDF
ဦးဖေမောင်တင်နှင့် GH Luce ဘာသာပြန်ဆိုသော မှန်နန်းရာဇဝင် (The Glass Palace Chronicles of Kings of Burma )
ဒေါက်တာ မိုရှေရေးဂါး ရေးသားပြုစုတဲ့ မြန်မာ့မြေမှ မွတ်စလင်များ သမိုင်းစာအုပ်
This entry was posted on January 10, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, မှတ်စုမှတ်ရာများ, အထူးကဏ္ဍ, နိုင်ငံရေး.	Leaveacomment
၁၉၆၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်နေ့ ရန်ကုန်နေ့စဉ်သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသော ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသား အစီအစဉ် …
ရိုဟင်ဂျာရှိလို့ ရိုဟင်ဂျာ အစီစဉ်လွင့်တာ
ရိုဟင်ဂျာများ နိုင်ငံသား လျှောက်ခွင့်ရှိကြောင်း ဝန်ကြီးဦးခင်ရီ ပြော
RFA – သမ္မတကြီးကလည်း ပြောနေတယ်၊ ဝန်ကြီးကလည်းပြောသေးတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ။
This entry was posted on January 10, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, မှတ်စုမှတ်ရာများ, အထူးကဏ္ဍ.	Leaveacomment
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ပထမဦးဆုံးသမ္မတကြီး စဝ်ရွှေသိုက် မြန်မာ့ တပ်မတော်အား ဂုဏ်ပြုစစ်ဆေးစဉ်
Nay Oo Lwin and Wunna Shwe shared Popular Journal‘s photo.
[*ဓာတ်ပုံ – ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ပထမဦးဆုံးသမ္မတကြီး စဝ်ရွှေသိုက် မြန်မာ့ တပ်မတော်အား ဂုဏ်ပြုစစ်ဆေးစဉ် (မူပိုင် – ဂတ်တီပုံရိပ်များ)https://www.facebook.com/photo.php?fbid=220534464749476&set=a.135378839931706.25621.100003787733026&type=1&theater]
This entry was posted on January 4, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, မှတ်စုမှတ်ရာများ, အထူးကဏ္ဍ.	Leaveacomment
This entry was posted on January 4, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, မှတ်စုမှတ်ရာများ, နိုင်ငံရေး.	Leaveacomment
မြန်မာပြည်မှာ သုံးစွဲခဲ့ဖူးတဲ့ ငွေအကြွေစေ့လေးတွေ ကို အမှတ်တရရောင်း
ရာဇဝင်မှာ တင်ကျန်ခဲ့တဲ့ ပိုက်ဆံတွေ…..
တာချီလိတ်– မယ်ဆိုင်တစ်ဘက်ကမ်းမှာ ဟိုးတချိန်က မြန်မာပြည်မှာ သုံးစွဲခဲ့ဖူးတဲ့ ငွေအကြွေစေ့လေးတွေကို အမှတ်တရရောင်းပါတယ်…
This entry was posted on December 27, 2012, in ဓါတ်ပုံများ, အထူးကဏ္ဍ, ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
Posted by danyawadi on December 25, 2012
This entry was posted on December 25, 2012, in ဓါတ်ပုံများ, အထူးကဏ္ဍ, ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
သီပေါမင်း၏ ရတနာဂီရိစံအိမ်တော်ရှေ့မှ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်, အိန္ဒိယ ရတနာဂီရိရောက် နန်းကျဗမာဘုရင်၊မိဖုရားနှင့်သမီးတော်များ
သီပေါမင်း၏ ရတနာဂီရိစံအိမ်တော်ရှေ့မှ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်
အိန္ဒိယ ရတနာဂီရိရောက် နန်းကျဗမာဘုရင်၊မိဖုရားနှင့်သမီးတော်များ
This entry was posted on December 23, 2012, in ဓါတ်ပုံများ.	Leaveacomment
ပေါက်တောမြို့တွင် ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင် ၄၂၀၀ သည် ၎င်းတို့၏ လယ်မြေများပေါ်တွင်နေထိုင်ရ
ပေါက်တောမြို့တွင် ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင် ၄၂၀၀ သည် ၎င်းတို့၏လယ်မြေများပေါ်တွင်နေထိုင်နေကြရသည်။
This entry was posted on December 10, 2012, in ဓါတ်ပုံများ, ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
ကဲ နာဇီနဲ့ ရခိုင်ဘာကွာလဲ ?????
ကဲ နာဇီနဲ့ ရခိုင်ဘာကွာလဲ ??????????
This entry was posted on December 8, 2012, in ဓါတ်ပုံများ.	Leaveacomment
ပေါက်တောမြို့နယ် ဓါတ်ပုံသတင်း , Pre-attack & Post attack Photo Pauktaw Township on 8 November 2012
This entry was posted on November 19, 2012, in ဓါတ်ပုံများ, အထူးကဏ္ဍ, နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
သမ္မတ အိုဘားမား၏ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ် နှင့် ဆက်စပ်ပြီးမြန်မာ့ရေပြင်အနီးရောက်ရှိနေသည့် အမေရိကန်ရဟတ်ယာဉ် တင်သင်္ဘော USS Bonhomme Richard (Landing Helicopter Deck – LHD 6) ၏ဓာတ်ပုံများအား စုစည်းဖေါ်ပြခြင်း …
သမ္မတ အိုဘားမား၏ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ် နှင့် ဆက်စပ်ပြီးမြန်မာ့ရေပြင်အနီးရောက်ရှိနေသည့် အမေရိကန်ရဟတ်ယာဉ် တင်သင်္ဘော USS Bonhomme Richard (Landing Helicopter Deck – LHD 6) ၏ဓာတ်ပုံများအား စုစည်းဖေါ်ပြထား ပါသည်။
http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Bonhomme_Richard_%28LHD-6%29 — in Myanmar.
This entry was posted on November 18, 2012, in ဓါတ်ပုံများ, နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးကရွေးလက်ယာတပ်သားများ အတွက်ရွှေပန္နက်ဗလီတော်ဆောက် ပေးခြင်း
နိုဝင်ဘာ၊ ၁၄ ၊ ၂၀၁၂
ယဉ်ကျေးမှု တက္ကသိုလ် ပါချူပ်(ငြိမ်း) သမိုင်းပညာရှင် ဦးတင်စိုးမှ မန်းတလေး နန်းတွင်း၌ ဗလီနှင့် ပတ်သက်ပြီး အထောက်အထား မတွေ့ရှိခဲ့ဟု ပြောကြားခဲ့တာကို ၈.၁၁.၂၀၁၂ ရက်ထုတ် NEWSWEEK ဂျာနယ်နှင့် အင်တာဗျူးတွင် ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ မန္တလေးနန်းတွင်း၌ တည်ရှိခဲ့သည် ဗလီများ အနက်မှ မင်းတုန်းမင်း တရားကြီးက ရွေးလက်ယာ တပ်သားများ အတွက် ရွှေပန္နက်ဗလီတော် ဆောက်ပေးခြင်းအကြောင်း M-Media မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မန္တလေးနန်းတော်အတွင်း မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးက ရွေးလက်ယာ တပ်သားများအတွက် ရွှေပန္နက်ဗလီတော် ဆောက်ပေးခြင်း
မန္တလေးမြို့ ယခုအခါ မင်္ဂလာတံခါးခေါ် ကျော်မိုးတံခါးအဝင်ဝ လွတ်လပ်ရေးကျောက်တိုင် အရှေ့မြို့ရိုးအနီးတွင် ရွေးလက်ယာအမှုထမ်းတို့ကို အမြဲနေထိုင်စေပြီး ဝတ်ပြုကြရန် မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးက “ရွှေပန္နက်ဗလီ”ဟူ၍ ရွှေပန္နက်ရိုက်ပြီး ဗလီဆောက်ပေး၏။ ၄င်း “ရွှေပန္နက်ဗလီ”၏ မော်လဝီဆရာကြီးကား သခင်ကြီးခေါ် ဆရာဘိုင်ကြီးဖြစ်၍ အလွန်တည်ကြည်ဖြောင့်မတ်၏။ အကျင့်သီလ၊ သိက္ခာ သမာဓိနှင့် ပြည့်စုံ၏။ လူုတိုင်းက ရိုသေကြ၏။
မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးက မွတ်စလင်များအတွက် သာသနာပိုင်ခန့်ထား၏။ ရွှေဘိုမြို့ပြင် ဈေးရပ်တွင် နေထိုင်သော အထူးအာဏာရ A.T.M အမှုထမ်းကောင်း တံဆိပ်တော်ရမင်း မြို့အုပ်မင်း ဦးဘိုးမြစ်မှာ ၄င်း “သခင်ကြီး”ခေါ် “ဆရာဘိုင်ကြီး”၏ သားအရင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယသားမှာ ရွှေဘိုခရိုင် ထန်းကုန်းဘူတာ ထန်းကုန်းရွာကြီးတွင် အထူးအာဏာရ သူကြီးမင်း ဦင်္းခြူဖြစ်ပါသည်။ မြို့အုပ်မင်း ဦးဘိုးမြစ်နှင့် သူကြီးမင်း ဦင်္းခြူတို့သည် နန်းမြို့အတွင်း “ရွှေပန္နက်ဗလီ” အနီးတွင် မွေးဖွားကြပါသည်။
၄င်း “သခင်ကြီး”ခေါ် “ဆရာဘိုင်ကြီး”အစ်ကိုမှာ မင်းတုန်းမင်းတရားနှင့် သားတော် သီပေါမင်းလက်ထက်တော်အခါက “ရွေးလက်ယာတပ်” မှ တပ်မှူးဖြစ်ပါသည်။ ဘုရင်မှပေးသောဘွဲ့မှာ “မင်းပျံချီ”ဖြစ်ပါသည်။ အမည်ရင်းမှာ “ဦးဟာရှင်” ဖြစ်ပါသည်။
ဗိုလ်မှုးကြီးဘရှင်ရဲ. မြန်မာနိုင်ငံသားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို.အား ရှေးမြန်မာမင်းများက ချီးမြင့်ခဲ့ပုံစာအုပ်ထဲကပုံ
ရွှေဘိုခရိုင် ကန်သာကုန်းရွာ မြန်မာမွတ်စလင်ပညာရှင် “မော်လဝီဆရာသီ” ပြုစု စီရင်ရေးသားသော “အစ္စလာမ်သာသနာ ကမ္ဘာ၏ မော်ကွန်းတော်” စာမျက်နှာ ၁၅ တွင် ရွေးလက်ယာတို့အကြောင်းနှင့် ရွှေပန္နက်ဗလီအကြောင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားထား၏။
ပြည်ပေါ်မှာသညာထားသည့်ပြင် …” စသည်ဖြင့် ဖြစ်လေသည်။
This entry was posted on November 16, 2012, in ဓါတ်ပုံများ, မှတ်စုမှတ်ရာများ, ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ဒေါ်ခင်ကြည်နှင့်ဦးနုတို့ကို ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားများနှင့်အတူတကွ တွေ့ရသောဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း …
ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသား များနှင့်အတူတကွတွေ့ရသော ဓါတ်ပုံမှတမ်း
This entry was posted on November 12, 2012, in ဓါတ်ပုံများ.	Leaveacomment